Ilay Fetin’ny Aterineto Voalohany Natao Tao Kambodia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2017 13:49 GMT
Folo taona lasa izay, nifandray tamin'izao tontolo izao i Kambodza. Nandritra ireo taona ireo, tsy dia nisy afaka nanoratra sy nahazo tsara ny voambolana sy ny dikan'ny ”Aterineto”, afa-tsy ireo mpifindramonina miasa ao amin'ny biraon'i Phnom Penh sy ireo Kambodziana vitsivitsy miasa ao amin'ireo fikambanana mpanao fanampiana. Taona vitsivitsy taty aoriana vao nitondra vidinà tolotra Aterineto afaka hifaninanana sy takatry ny mponina ao an-toerana ny fifaninanan'ireo orinasa vahiny. Na dia manana taha ambany indrindra amin'ny fidirana amin'ny Aterineto aza ity firenena ao Atsimo-Atsinanan'i Azia ity, tena mahavariana manokana ny fampiasana mavitrika sy mahagaga ilay tambajotra iraisam-pirenena.
Vao tapitra izay ny Andron'ny Lainga (Aprily). Tamin'ity volana Mey ity, nisy fampirantiana teknolojia roa navitrika indrindra natao tao amin'ny firenena. Ny 15 Mey 2006 no nikarakaràna voalohany indrindra ny Chatter Party ho fihaonana mivantan'ireo Kambodziana bilaogera sy mpankafy teknolojia. Nanasongadina fampisehoana lamaody, vazivazy an-tsehatra, antsapaka, resaka am-pirahalahiana, ary lalao ny tapany harivan'ilay hetsika. Napetraky ny orinasa misahana ny vohikala ao an-toerana miaraka aminà mpanohana ara-barotra marobe ilay fetin'ny Aterineto, araka ny niantsoan'ny maro azy. Misy ny fotoana izay nananganan'ireo Kambodziana blaogera maro fifandraisana virtoaly teo amin-dry zareo samy zareo tamin'ny alalan'ny fanehoankevitra, imailaka sy efitra firesahana IRC (virtoaly). Satria nasaina hanatrika ilay fety daholo ny rehetra, betsaka tokoa ny vintana mety ahafahan'ny maro amin'izy ireo mamadika ny tontolo virtoaly ho tena izy, satria maro amin'izy ireo no mifandray amin'olona hafa tamin'ny fomba virtoaly. Manana andian-tsarin'ny zava-niseho i Kalyan. Iray amin'ireo hetsika mampientananentana ny fampisehoan'ny weblogger. Nanoratra izy hoe: ”mpandray anjara manoratra ny anarany, imailaka sy laharan'ny telefaoniny ao amin'ny petadrindrina.”
Olona teo amin'ny 200 teo no niseho tamin'ilay fety rehefa voazara ireo tapakila miisa 1000. Noho ny antony sasantsasany, hatreto dia fandraharahana iray nahasarika mpanohana ara-barotra ny fifandraisana an-tserasera toy izany.
Ratha Seth, Kambodziana mpitoraka blaogy izay nampiranty tany amin'ilay fety, dia nanoratra tamin'ny teny Khmer fa: ”niresaka mikasika ny olana mifandray amin'ny Aterineto ireo mpandray anjara, ary indrindra ny fifampizarana torohay sy fahalalàna amin'ny Aterineto.”
Ary nanampy i Soben fa: ”ho famintinana, mbola tsara kokoa noho ilay ICT Expo ity fetin'ny Aterineto ity. Tena nifantoka indrindra tamin'ny lohahevitry ny Aterineto izy ireo. Ny ankamaroan'ireo mpandray anjara dia olona tanora izay matetika mihaona amin'ny fomba virtoaly ao amin'ilay efitra fiseraserana ao Kambodza.
Toa voasintona haingana amin'ny zavatra maoderina ireo tanora, na ahoana na ahoana. Ahitana ny fampiasana solosaina sy teknolojia, nanomboka niblaogy tamin'ny volana Febroary ny zazalahy iray mianatra amin'ny sekoly ambaratonga ambony. Izy angamba no Kambodziana tanora indrindra mpitoraka blaogy . 15 taona i Darachan ankehitriny. Ary nanomboka ny blaoginy tamin'ny faran'ny taona 2005 ny zazavavy iray, ‘Khmer-Cyberkid,’ 16 taona. Na mino na tsy mino ianareo, samy manoratra amin'ny teny Anglisy izy roa ireo.